Mawduucu waa King ... Laakiin Mid Kaliya Ayaa Xiran Taajka | Martech Zone
Talaado, Maarso 7, 2017 Arbacada, Maarso 8, 2017 Douglas Karr
Meel walba waad ka maqashay oraahda Mawduucu waa King. Ma aaminsani in taasi la beddelay, mana aaminsani inay waligeed isbeddelayso. Hadday tahay shirkadaha wax ka qoraya wax soo saarkooda iyo adeegyadooda, warbaahinta ay kasbadeen inay wax ka qoraan, warbaahinta la wadaago ee lala wadaago, warbaahinta lacagta la siinayo ee dhiirrigelisa… waa mawduuc riixaya saamaynta, maamulka, iyo go'aammada wax iibsiga.
Dhibaatadu waxay timaadaa marka qof walba la hoos aamino taas ay nuxurka waa boqor. Aan runta sheegno, waxyaabaha intiisa badani waa wax laga naxo. Had iyo jeer waa khadka-soo-saarka, walxaha cagaaran oo aan lahayn dabeecad, sheeko, ama wax kasta oo lagu kala sooco. Ama waa suuqgeyn-kuhadal, hooseeyaha guud ee ka kooban waxyaabaha hoos loo hoos dhigay iyada oo loo marayo lakabyada xafiisyada iyo micromanagement-ka.
Midkoodna, dabcan, uma qalmo taaj. Mawduucaagu ma noqon karo boqor illaa uu noqdo mid gaar ah, cajiib ah, oo ku guuleysta dagaalka. Marabtaa inaad boqor noqoto? (Ama Boqoradda - waxa ku jira ma laha jinsi). Halkan waxaa ku yaal tilmaamo:
Dharka qaybta - Boqorka ma xidho dharka dadka caadiga ah, dharkiisa waxaa si qurxoon loogu sharraxay dhagaxyo qaali ah, biro qaali ah, iyo dharka wanaagsan. Sidee macluumaadkaagu u egyahay?
Amar maxkamadaada - Boqorka ma aamusna. Hadalkiisa kama hooseeyo, wuxuu ku dhaleeciyaa dusha sare ee codkiisa. Isagu waa kalsooni oo madax-bannaan yahay. Ma tahay waxyaabahaagu?
Cadawgaaga baabi'i - Haddii aad rabto inaad Boqor ahaato, waa inaad maamushaa boqortooyadaada. Miyaad isbarbardhigtay waxyaabahaaga kuwa kula tartamaya? Ma noqon karto mid dhow; waa inay ku garaacdaa iyaga cilmi baaris, warbaahin, cod, iyo saameyn. Maxaabiis ha qabsan.
Hawlgalin nashaadayaashaada - Kuma filna inaad sii fadhiisato boqortooyadaada. Mawduucaagu wuxuu u baahan yahay in loo qaado darafyada dhulka kuwa ku dhaartay daacadnimadooda. U-doodayaasha shaqaalaha, saamileyaasha, iyo dhagaystayaashaada waa inay fariintaada gaarsiiyaan dadka badan.
Sii hadiyado qaali ah - Boqortooyooyinka deriska ah ayaa u jira dhawr qadaadiic dahab ah. Ha ka baqin inaad boqortooyooyinka boqortooyooyinka derisyada ah ku badhiso iyadoo hadiyado qaali ah la siiyo. Si kale haddii loo dhigo, King Zuck wuxuu leeyahay dhagaystayaal aad u tiro badan - isaga sii!
Haye, way fiicantahay inaad ahaato King. Laakiin waxaad kaliya tahay guillotine inaad ka weydo madaxaaga. Diyaar u noqo inaad difaacdo dhulkaaga oo aad cadaawayaashaada u xukunto cabsi.
Tags: xujocontent waa boqorContent SuuqtaajcanbahaBoqor